Prime Minister: Belize kugadzirira ese macoronavirus mamiriro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Prime Minister: Belize kugadzirira ese macoronavirus mamiriro
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chinonyanya kukosha cheHurumende ye Belize ndiko kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka kwevagari venyika. Kubva nhasi, hapana makesi akasimbiswa e Covid-19 muBelize asi iyi ndiyo mamiriro anogara achichinja. Hutano hweveruzhinji, hwemagariro pamwe nehupfumi hwakarongedzwa zvekuti kutarisisa kwakazara uye kusimbisa kukuru kunodiwa kuti varwisane navo. Belize saka iri kugadzirira zviitiko zvese uye kutungamirwa nezvidzidzo uye maitiro akanakisa anouya kwatiri mazuva ese kubva kune vedu vehunyanzvi uye kubva kune zvakaitika kune nyika mudunhu nepasirese.
Dare remakurukota rakaunganidza musangano unokosha nezuro kuti vataure nezve COVID-19. Kubuda mumusangano iwoyo, Khabinethe yakasimbisa kuumbwa kwe COVID-19 Task Force uye COVID-19 National Oversight Committee. Ndabvunza Mutungamiriri wevanopikisa, uye abvuma, kuti abate chigaro neni National Oversight Committee. Kunze kweHurumende nekupikisa, Komiti ichaumbwa nevamiriri vanobva kuBelize Council of Churches, Belize Chamber of Commerce nemaindasitiri, Belize National Network yemasangano akazvimiririra neBelize Social Security Board. NTUCB yakokwawo kuti itumidze mumiriri asi haisati yapindura.
Chinangwa cheKomiti iyi ndechekupa manejimendi ekupedzisira ekuedza kweBelize kubata neCOVID-19. Zuva nezuva mhinduro yehutano hweveruzhinji ichave iri basa rekutanga rebazi rezvehutano neCOVID-19 Task Force uye munguva pfupi iwe uchanzwa zvakanyanya kubva kuDHS mune izvi. Saizvozvo, nepo iyo National Oversight Committee mukuyedza kwayo superintendency ichatarisa zvese, ichanyatso tarisa pane zvehupfumi mamiriro enjodzi. Nekudaro, pamusangano wedu wekutanga wakatarwa neMuvhuro unouya, tichanzwa kubva kuna Gavhuna weCentral Bank, Munyori wezvemari, uye CEO weBazi rezvehupfumi. Ivo, pamwe chete neSSB, vachabatsira komiti kuronga mepinduro inodiwa kuti vagadzirise zvinokanganisa dambudziko revashandi, vashandirwi uye zvikamu zvese zvehupfumi hweBelize. Zvinhu zvatichange tichitarisa zvinosanganisira: rubatsiro rwechimbichimbi kuvashandi; mukana wekubhadhara mutero; mubairo wekuwedzera wekuratidzira kwakanangana neCorona; kuisirwa mutero mahara kwezvinhu zvakakosha; moratorium yekubhadharwa kwemalimboresi kumabhangi nemubatanidzwa wechikwereti; uye post-Corona kukurudzira nekuwedzera zvakanyanya kukurumidza kushandiswa kwemari, kufambira mberi kwemubhadharo etc.
Chikamu chechipiri chatiri kugadzira ndicho COVID-19 Task Force. Izvo zvichave sachigaro naDr Marvin Manzanero, Director wehutano Services. Ichasanganisira kunyanya vamiririri vanobva kumberi kweHurumende uye quasi-hurumende vamiririri. Asi vese veSocial Partner varikukumbirwa kutora chikamu zvakare mukomiti iyi. Tiri kutsvagawo rubatsiro rwehunyanzvi kukomiti iyi, kuti ibve kune vese vemuno kwete mune yeruzhinji uye nevekunze Hurumende dzinoda kubatsira. Isu takanyanya kusvika kushamwari dzedu dzeCuba uye tichatsvaga kubva kwavari imwechete kana vazhinji nyanzvi dzehutano hwevanhu kuti vabatanidze brigade yavo yekurapa yatove munyika medu. Taiwan inoita kunge yakave nekubudirira kukuru mukugadzirisa dambudziko iri saka isu tichave tichitarisa kukwereta vamwe vevakuru vavo. Munzvimbo imomo, vanhu vakaita saLaura Longsworth, Musoro weNational AIDS committee, mudyandigere Belizean Dr Michael Vernon aishanda muUS neCDC, nevatungamiriri vemasangano senge Diabetes Association vanogona kumanikidzwa kuita basa. Ndinofanira kujekesa kuti nepo Task Force iyi yave kuwedzerwa nekugadzwa zviri pamutemo, bazi rezvehutano rave neboka rayo rinoshanda kubva muna Ndira 2020. Dr Manzanero vachataurawo zvakawanda pamusoro peizvi uye votaura kune zvese zvakatoitwa uye zviri kuitwa. Task Force ichangobva kudomwa uye yakasimbiswa ichasangana vhiki nevhiki kana kakawanda sezvingangodiwa.
Ini ndinodawo kutaura kuti sedanho rinokosha rekushandisa bazi rezvehutano rave kutoisa chirongwa cheCOVID-19. The Task Force ichavandudza uye nekuvandudza chirongwa ichi apo isu tichienderera; asi chimwe chezvinhu zvakatobvumiranwa igwara rekutaurirana rekuona kuti kuendeswa kuruzhinji rwechokwadi, ruzivo rwechizvino-zvino maererano neCOVID-19.
Pakati penyika, COVID-19 iri kuramba ichichinja. Nekudaro, Hurumende irikushandawo nevamwe vedu vekunze kurongedza mhinduro uye kuramba tichivandudza pane ruzivo rwechizvino-zvino nemaitiro akanakisa. Ticharamba tichiita zvese mukuedza kuchengetedza maBelizeans akachengeteka. Muchirevo chechinyorwa ichi tinofanirwa kuve takagadzirira chero nguva kupindura nemazvo sezvo tyisidziro inochinja. Saizvozvo sarudzo dzinofanirwa kutorwa pane zvinotevera:
Kunyangwe kana kusabvumidza ngarava dzekupinda mukati kupinda;
Kunyangwe kana kusabvumidza kuungana kukuru;
Kunyangwe kana kusavhara zvikoro;
Kunyangwe kana kwete kurambidza kufamba kwemhepo;
Kunyangwe kana kwete kudzora rusununguko rwekupinda pamiganhu yedu yenyika;
Izvi hazvisi zvisarudzo zviri nyore zvekuita zvichipiwa pachena uye nezvenyeredzi zvavangave nazvo patiri neupfumi, kunyanya kushanya. Asi hapana chinhu chakakosha kupfuura kuchengetedza hutano hwevanhu vedu; hapana chinhu chakakosha kupfuura kuponesa hupenyu hweBelizean. Ini ndanga ndisingade kuzivisa chero sarudzo dzakadai nhasi ndisina kuisa nyika yedu, pamwe neavo vanoshanyira nekushandira Belize. Asi ini ndinopa zano izvozvi kuti pakarepo mushure memusangano uyu wevatori venhau ndichave ndichisangana nechikwata chehutano uye ndichitaura neMutungamiriri weVanopikisa. Ini ndichave, hongu, zvakare ndiri kutaura nevekushanya pamwe nevane chekuita nebhizinesi.
Nguva pfupi mushure meizvozvo ini ndaizotarisira kuzivisa kuti, kwete kana, chero kana ese matanho ataurwa achazotanga kushanda.
Zvichakadaro, isu tinoda nekukurumidza kuti tirege kufamba kwese kusiri-kwakakosha uye nekuraira kutanga kwenzanga.
Ini ndoda kuvhara pane chinyorwa chekusimbiswa. Ini ndinoshuvira kusave akajeka, kwete kuve akareruka nekuti ini handikwanise kurerutsa njodzi iri kuuya. Asi kana neni handikwanise kutengesa ipfupi kugona kwedu kupfuura izvi. Panguva yakaita Hurumende iyi inodaidzwa kuve muchengeti wenyika; uye mumwe nemumwe wedu anodaidzwa kuti ave muchengeti weumwe. Zviri pamwe chete, saka, kuti tinotarisana nedambudziko iri; tiri pamwe chete kuti tichagadzirisa dambudziko iri; uye tiri pamwe chete kuti tichakunda dambudziko iri.
Belize ichabuda, Belize ichawedzera, Mwari komborera Belize!